Fanadiovana eo anivon’ny zandarimaria : Zandary enina natolotra ny fampanoavana -
AccueilSongandinaFanadiovana eo anivon’ny zandarimaria : Zandary enina natolotra ny fampanoavana
Fanadiovana eo anivon’ny zandarimaria : Zandary enina natolotra ny fampanoavana
Mitohy hatrany ny fanadiovana anatiny eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Noho ny ezaka goavana izay vita, dia zandary miisa enina indray no natolotra teo anatrehan’ny fampanoavana ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Ambositra omaly. Ankoatra azy ireo, dia olona miisa telo ambin’ny folo hafa, izay nahitana vehivavy telo ihany koa no nohenoina tany an-toerana. Araka ny fampitam-baovao avy eo anivon’ity vondron-kery ity, dia voarohirohy tamin’ny resaka halatra, fanodinkodinana, fitazonana ary varo-maizina fitaovam-piadiana mahery vaika, toa ny basy FC sy basy poleta am-polony, miaraka amin’ny bala an-jatony maro izy sivy ambin’ny folo ireo. Rehefa nahazo fampilazam-baovao ny avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa manjaka ny tsy fandriam-pahalemana izay nahafatesasana olona sy mpitandro filaminana maro any amin’iny faritra Amoron’i Mania iny, sy ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana any an-toerana, dia notohizana ny fanatanterahana ny baiko sy toromarika napetrak’ingahy sekreteram-panjakana miadidy ity vondron-kery ity. Isan’ny nanaovana fitsirihana sy fanaraha-maso ny tao an-tampon-tanànan’Ambositra, ka hita avokoa ireo mpivarotra basy sy bala tany an-toerana.
Teo ihany koa no nahafantarana fa misy zandary mandray anjara ao anatin’ity asa maloto ity. Niantomboka tamin’ny fahatrarana roa vavy, nivarotra bala miisa 350 tamina roalahy tao amin’ny fokontanin’Ambanivolafotsy ny fisamborana. Tamin’ny alalan’ny fakana am-bavany azy ireo indray avy eo no nahafahana nisambotra zandary iray, izay voalaza fa mpitahiry ireo fitaovam-piadiana ireo ao amin’ny sekolin’ny zandary ao Ambositra. Niroso tamin’ny fisavana ny tranon’ity manam-pahefana ity ireo mpitandro filaminana namany taorian’izay, ka mbola nahitana bala am-polony sy fitaovana vitsivitsy momba ny basy indray tao aminy. Tsy nionona hatreo ny teo anivon’ity vondron-kery izay manao vaindohan-draharaha amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ity fa mbola nanapa-kevitra ny hitsirika ny fitantanana ny fitaovam-piadiana tao Ambositra ka nibaribary avy hatrany fa nisy fahabangany an’arivony ny bala tao an-toerana. Noho izay zava-nisy izay, dia voarohirohy niaraka tamin’io zandary io avokoa ireo zandary miisa dimy izay miara-miasa aminy ao amin’io sampana io. Rehefa nitohy moa ny famotorana, dia tafakatra sivy ambin’ny folo ireo voasambotra izay nahitana ireo mpivarotra sy mpividy ireo basy sy bala marobe ireo.